आजको राशिफल: कसको दिन शुभ कसको अशुभ? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०७८, बुधबार ७ : १४
आज वि.स २०७८ साल कात्तिक १० गते बुधबार । सन् २०२१ अक्टोबर २७ तारिख। नेपाल संम्बत् ११४१ । कार्तिक कृष्ण पक्ष। सत्तमी तिथी। सौर्यदय विहान ६ः१२ । सूर्यास्त बेलुकी ५ः२२ बजे। आजको राशिफल कसको कस्तो छ? तल हेर्नुहोस्
मेष राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। धनको हिसाबले पनि आजको दिन राम्रो रहनेछ । आज तपाइँको रोकिएको धन अचानक प्राप्त हुनेछ। खेल जगतसँग जोडिनुभएको छ भने आज तपाईलाई पनि विजेता ट्रफीले सम्मानित गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । आज परिवारमा पनि खुशीको वातावरण रहनेछ। आज तपाईको जीवन साथीसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। सन्तानको सहयोग रहनेछ।
बृष राशि (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो)
बृष राशि हुनेहरुको लागि पनि आजको दिन धेरै राम्रो छ। आज तपाईको स्वभाव धेरै भावुक रहनेछ। कार्यस्थलमा वा परिवारमा धेरै भावनात्मक रूपमा निर्णयहरू नलिनु उचित । परिवारका सदस्यहरूसँग पनि आजको दिन राम्रो रहनेछ। आज तपाई आफ्नो जीवनसाथीसँग कतै बाहिर जाने कार्यक्रम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अध्ययनअध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ। महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्ला। परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट हुनेछ।
सन्तान सुख बढ्ला । प्रेममा सफलता प्राप्त होला । काममा जिम्मेवारी थपिनेछ । पारिवारिक यात्रा हुनेछ । अधुरा काम बन्नेछन् ।
मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह रहला । पदोन्नतीको योग छ । राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ । वित्तीय संस्थाबाट सहयोग मिल्ला । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । आज रमणीय र सुखद् यात्राको योग छ।
आज परीक्षा आदि प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन सकिनेछ । घर परिवारका सदस्यहरूबाट सहयोग पाइनेछ । रमणीय र सुखद् यात्राको योग पनि छ। सामान हराउन सक्नेछ । पैसा बढी खर्च हुनेछ । अनावश्यक काम आईपर्नेछ ।
एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ बन्धुबान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । मनमा हर्ष, उमङ्ग र उत्साह रहला । रमाइलो यात्राको योग रहेको छ ।
व्यवसायमा फाईदा हुनेछ । अरुको साथ पाईनेछ ।
सरकारी काममा प्रगति हुनेछ । सामाजिक प्रशंसा मिल्नेछ । राजनीतिमा फाईदा पाईनेछ ।
आरोग्यता र ऐश्वर्य वृद्धि होला । साझेदारीको काम बन्नेछ । धर्म कर्ममा समय बित्नेछ । परोमकारमा मन जानेछ । सामाजिक योगदान रहनेछ।
आज सामाजिक सेवा गर्ने अवसरले मानप्रतिष्ठा बढाउनेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा पनि सफलता पाइनेछ। शरीरमा विसञ्चो देखिनेछ ।
महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पादन गर्दा फलदायी हुनेछ । साथीभाईको विशेष सहयोग रहनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । पारिवारिक रमाइलो बढ्नेछ । यात्रामा खर्च हुनेछ । प्रेममा प्रगति रहनेछ ।
महिला वा मित्र बाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । आर्थिक कारोबारमा सफलता पाइएला । लाभदायक यात्रा होला । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । मुद्दा मामिला किनारा लाग्नेछन् ।